Muxuu duqa magaalada Cuauhtémoc isaga dhigay qof naafo ah? | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Muxuu duqa magaalada Cuauhtémoc isaga dhigay qof naafo ah?
Himilo -Dhacdo aan caadi aheyn balse lagu tijaabinayo bulshada ayay ahayd markii duqa magaalo ku taalla Maksiko uu iska dhigay qof naafo ah oo u baahan kaalmo si uu u tijaabiyo sida ay bulshada ula dhaqmayso.
Markii cabasho badan uga timid naafada iyo dad si gaar ah loo faquuqo oo ka sheeganayay dhaqanka bulshada ayaa Carlos Tena oo ah duqa magaalada Cuauhtémoc oo katirsan gobalka Chihuahua ee Maksiko waxa uu go’aansaday in uu isaga tijaabiyo dhaqanka bulshada uu hoggaamiyo isaga oo iska dhigaya qof naafo ah.
Mr Carlos ayaa isaga oo jilaya qof naafo ah waxa uu tagay xarumaha adeegga guud, waxaana qorshahan uu dejinayay muddo labo billood ah.
Isaga oo maro ku xertay qoorta islamarkaana qariyay wajigiisa si aan loo aqoonsan kuna fadhiya kursiga naafada ayuu Mr Carlos tagay xarunta horumarinta bulshada xilli uu dalbanayay gargaar.
Waxa uu codsaday cunto lacag la’aan ah oo la siiyo dadka naafada ah iyo saboolka sida uu dhigayo sharciga balse lama siin tixgelin iyadoo waliba la faquuqay.
Markii uu la kulmay khibrada nuucaasi ah ayuu gaaray isla xafiiskiisa isaga oo cabasho ah si uu ula kulmo duqa magaalada laakiin waxaa loo sheegay in uusan joogin. Waxa uu codsaday kulanka xoghayaha, waxaa lagu wargeliyay in uu sugo saacado.
Intaa kaddib, Mr Carlos ayaa xaqiiqsaday cabashooyinka naafada ee soo gaaray, waxa uu ka kacay kursigii naafada iyadoo dad badan sheekada ku noqotay mid layaab leh.
“Ujeedka khibradan waa in la soo bandhigo xaqiiqda ay la kulmaan muwaadiniinta,” ayuu yiri duqa magaalada Cuauhtémoc.
Wargeyska Maksiko ee El Vocero ayaa sheegay in Tena uu markasta ahaa nin u dooda sinnaanta dadka gaar ahaan xuquuqda kuwa la faquuqo ee laga saaro bulshada.
Previous: Atletico Madrid oo ku dhaw saxiixa xiddig ay dooneyso Napoli
Next: Liverpool oo kula biirtay Arsenal iyo United tartanka saxiixa Fedor Chalov
Wax ka ogow inta jeer oo Xajka uu baaqday!
Sawirro: Jeegaantii gubaneysay oo lagu arkay Japan!